Eyona nto ingcono ngo-2020 I-ebike zizithuthuthu ezithandwayo kwibhayisekile yombane uMenzi kunye neFactory |Qiangsheng
Ngo-2020 I-ebike zibhayisekile ezithandwayo kwibhayisekile yombane
F&R aluminiyam 110 isiqhoboshi igubu
F dia 42mm ifolokhwe hydraulic, R shocker absorber
14 * 2.5 iTubeless
Ubungakanani bokupakisha 1440*310*760
Umthwalo womthamo 40HQ150sets/40HQ(CKD)300sets
Sithumela ngaphandle isethi epheleleyo yee-rickshaw spare parts ngokuwisa ngokupheleleyo isithuthi.
Zonke iindawo ezisecaleni ziya kugcinwa zikwimeko elungileyo yokudityaniswa ngokupakishwa nge-bubble warp, ibhokisi, ingxowa yeplastiki elukiweyo kunye nebhokisi yomthi.
Ngoku, ngaphambi kokuba siqhubele phambili, singathanda ukukunika amanqaku aphambili
Ezi zezinye zeempawu ze-Ebikes/rickshaw.Kodwa, umbuzo ngowokuba singatsho njani ukuba eli shishini liya kusebenza ngokuqinisekileyo?Ewe, iya kusebenza kuba iyimfuneko yexesha lanamhlanje.
Okwangoku, sonke sifuna iinkonzo zothutho ezingcono.Nokuba uthetha ngezixeko ezimbaxa okanye imimandla yasemaphandleni, sifuna iinkonzo zothutho ezikhawulezayo nezingabizi mali ininzi kwimihla ngemihla ukuya phezulu naphantsi.
Ke, eli shishini lebhetri yoMbane e-Indiya liya kusebenza kuyo yonke indawo kuba lixabiso eliphantsi, liyakhawuleza kwaye linokugubungela uluhlu olubanzi lwendawo.
Ngaphezu koko, ezi-e-blike zikwaluncedo ekugcineni okusingqongileyo.Ngaloo ndlela, abantu abafundileyo ngokuqinisekileyo baya kukuthanda ukuyisebenzisa.
I-Xianghe Qiangsheng i-factory tricycle yombane esekwe ngo-2006, ikhonakwiXianghe ilizwe Langfang isixeko.Siye safumana isatifikethi seCCC kunye neCEiqinisekisiwe.
Sinezakhono ezibini ezigqwesileyo, ipeyinti ye-electrophoresis kunye neetricycel ezineisakhelo semoto, esisinceda ukuba sivelise ibhetri ekumgangatho ophezulu
Sinokuvelisa iiseti ezingama-500 ngosuku, ngoko sinokuthembisa ubukhulu becala kunye nokubonelela ngexesha elifanelekileyo.
Imarike yamazwe ngamazwe:
Kuze kube ngu-Epreli 2013 sele sakhe iChain yonikezelo oluzinzileyo eAsia, kuMbindi-Mpuma
EAsia, eAfrika, eMzantsi Melika, eOstreliya, eYurophu naseIndiya.
Iqela leR&D yobuNgcali
I-Qiangsheng ineqela le-R&D elinamava, sinokucwangcisa ukuphuhlisa
imodeli kunye netekhnoloji yokuGcina kunye namaXesha.
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na ibhetri blikes, nceda uqhagamshelane nathi
kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezidingo zakho .Enkosi !
Igama leKhampani: Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory
Idilesi yokuSebenza:Ipaki yoShishino yaseQianwang, kwiNqila yaseXianghe, eLangfang, eHebei, eTshayina
Iminyaka eyi-10 igxile kwi-tricycle, iminyaka emi-5 yokuthumela kwamanye amazwe amava.
Ngaphambili: 48v800w iintsimbi zombane zikaritsho
Okulandelayo: I-Smart City Bajaj edumileyo yaMandla oMbane oMbane weeTricycle zaBakhweli
Ubukhulu be-500kg yokuLayisha uMpatho weTricycle yeTricycle Expr...
I-ECO friendly cargo trike inkunkuma elayitiweyo e...
Uyilo oluQhelekileyo lwaseAsia Uritsho oluzenzekelayo oluThengisa iE...
Uyilo lwezoRhwebo lwaseYurophu i-E Rickshaw eshushu iThengisa...
I-70cm Ububanzi boSapho iSebenzisa abantu aba-3 boMbane beTricycl...
Express tricycle yonikezelo lombane trike top ibe...
ITukTuk Izithuthi ezinamavili amathathu Electric Tuk Tuk TukTuk Manufactures iTukTuks ITuk Tuk iyathengiswa